သုတစာပေကဏ္ဍ | Danya Wadi
သမတ အူမရ် (Umar) လူကို လူလို မြင်ပြီး၊ ၎င်း၏ ကျေးကျွန်အပေါ်မှာ ထားရှိသော ကိုယ်ချင်းစာ တရား
By danyawadi January 13, 2020 Leaveacomment
၁၉၇၀ ခုနှစ် ကျောင်းသုံးစာအုပ်ကော်မတီ မှ ထုတ်ဝေခဲ့သော တတိယတန်း နိုင်ငံသမိုင်း ပုံပြင်များ စာအုပ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သော ဒုတိယ ခလီဖွှဟ် ဟဇရသ်အိုမရ်သခင် နှင့် မင်းလုလင် အကြောင်း
ရခိုင်မင်းသမီးဧခြင်း (သို့မဟုတ်) မောက်တော်ဧေးခြင်း ( ထွန်းရွှေခိုင်-မဟာဝိဇ္ဇာ)
By danyawadi November 24, 2019 Leaveacomment
မွနျမာ့ စှယျစုံကမျြးအတှဲ (၁) အပိုငျး (ခ)
By danyawadi October 27, 2019 Leaveacomment
မွနျမာ့ စှယျစုံကမျြးအတှဲ (၁) အပိုငျး (က)
By danyawadi December 28, 2016 Leaveacomment
11.02.2016 သင်္ဘောလက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကို ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ Badge Me play ပထမဆုံးရေချစဉ်မှာပဲ နစ်မြှပ်ခဲ့ရတဲ့ တိုင်တန်းနစ်သင်္ဘောကြီးနဲ့ တစ်ပုံစံတည်းတူတဲ့ Titanic II ကို မကြာခင်စီးနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Daily Mail ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Titanic II ကို Blue Line Star ရေကြောင်းကုမ္ပဏီက ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်က နစ်မြှပ်ခဲ့တဲ့ သင်္ဘောကြီးနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး တစ်ပုံစံတည်းတူအောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ play play ယခင်သင်္ဘောကြီးအတိုင်း ဧည့်ခန်းတွေ၊ အများဆိုင်နေရာတွေမှာ ခေတ်မီစက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကို မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အထဲပိုင်းအပြင်အဆင်တွေကို ရှေးခေတ်ပုံစံအတိုင်းပြုလုပ်ထားပါတယ်။ play play စီးတဲ့လူတွေကို ပထမတိုင်တန်းနစ်သင်္ဘောကြီးခေတ်က အဝတ်အစားတွေ ဝတ်ဆင်နိုင်အောင်လည်း စီစဉ်ထားပေးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတယ်လို့ […]
By danyawadi January 26, 2016 Leaveacomment
Patience = စိတ်ရှည်ခြင်း Sulking = စိတ်ကောက်နေခြင်း Dreaming = စိတ်ကူးယဉ်နေခြင်း Interesting = စိတ်ဝင်စားနေခြင်း Annoying = စိတ်တိုနေခြင်း Let-down = စိတ်ပျက်ရခြင်း Relief = စိတ်သက်သာခြင်း Excitement = စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း Impatient = စိတ်မရှည်သော Eager = စိတ်အားထက်သန်သော Enthusiastic = စိတ်ပါဝင်စားသာ Stress = စိတ်ဖိစီးသော Disgruntled = စိတ်တိုနေသော၊ စိတ်ဆိုးနေသော Depressed = စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းနေသော Anxious = စိုးရိမ်ပူပန်သော Upset = စိတ်ညစ်နေသော Deject =စိတ်မှိုင်ညိုးနွမ်းနေသော Despondent = စိတ်ပျက်လက်လျော့သော Frustrating […]
ဆောက်လုပ်ရေး နှင့်ပတ်သက်သောဝေါ်ဟာရများ အပိုင်း (၁)
construction structure = ဆောက်လုပ်ရေးအကြမ်ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်သောဝေါ်ဟာရများ ။ Stake တိုင်ငုတ်ချွန်။ ပန္နက်တိုင် ။ Foundation အုတ်မြစ်ချခြင်း ။ Pole (concrete pole) တိုင်(ကွန်ကရစ်တိုင်) ။ Pillars ဖောင်းအလှတိုင် ။ Wall နံရံ ။ Beam (concrete beam) ထုပ် (ယက်မ) ။ Floor ကြမ်းခင်း။ ကြမ်းပြင်။ Balcony Floor လသာဆောင်ကြမ်းခင်း။ ကြမ်းပြင်။ Toilet Floor အိမ်သာကြမ်းခင်း။ ကြမ်းပြင်။ Polished Concrete ချောမွတ်ပြောင်လက်သောကွန်ကရစ်နံရံကြမ်းပြင် ။ Brick (Engineering Bricks) အုတ်ခဲနီ ။ Sand Lime Bricks (cement bricks ) […]
English words meaning
By danyawadi January 25, 2016 Leaveacomment
1.palm = ထန်းပင် wine = ၀ိုင်အရက် palm wine = ထန်းရည် 2.bale = ဘေထုပ် fruit = အသီး bale fruit = ဥသျှစ်သီး 3.car = ကား park = ပန်းခြံ car park = ယာဉ်ရပ်နား စခန်း 4.dragon = နဂါး fruit = အသီး dragon fruit = နဂါးမောက်သီး 5.monkey = မျောက် business = အလုပ်ကိစ္စ monkey business = မတော်တရော်ကိစ္စ 6.best = အကောင်းဆုံးဖြစ်သော man […]
By danyawadi January 23, 2016 Leaveacomment
My Heart Will Go on…” ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Every night in my dreams ညစဉ် ညတိုင်း ငါ့အိပ်မက်ထဲမှာ I see you, I feel you မင်းကိုမြင်ပြီး ထိတွေ့ခံစားရတယ် That is how I know you go on. ဒါ့ကြောင့် မင်းရှင်သန်နေတယ်ဆိုတာ ငါသိတာပေါ့ Far across the distance And spaces between us မင်းနဲ့ငါကြားက ကာလ၊ ဒေသ၊ အကွာအဝေးတွေဖြတ်သန်းပြီး You have come to show you go on မင်းဆက်လက်ရှင်သန်ဆဲဆိုတာပြဖို့ ငါ့ဆီလာခဲ့ပြီ […]
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခြေဖ၀ါးလက္ခာကိုကြည့်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း အစိတ်အပိုင်းကို သိနိုင်ပြီ
By danyawadi January 9, 2016 Leaveacomment
1. Sinus=လူ့ဦးခေါင်းခွံတွင်နှာခေါင်းပေါက်နှင့်ဆက်သွယ်ထားသော ဦးခေါ င်းခွံအတွင်း လေလမ်းကြောင်း။ 2. Neck= လည်ပင်း။ (တိရစ္ဆာန်) လည်ပင်းသား။ 3. Trachea=လေပြွန် 4. Ear=နား။ နားရွက် 5. Eye=မျက်စိ။ မျက်လုံး 6. Vocal Cords=အသံကြိုး။ 7. Lung=အဆုတ်။ 8. Shoulder=ပခုံး။ 9. Thyroid=ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိန်းသည့်ဒြပ်တစ်မျိုး ကိုထုတ်ပေးသော သိုင်းရိုက် အကျိတ်။ 10. Diaphragm= ရင်ဘတ်နှင့် ၀မ်းဗိုက်အကြားရှိ ကြွက်သားစိုင်။ ရင်ဝမ်းခြားကြွက်သား။ 11. Heart=နှလုံး။ နှလုံးသား။ စိတ်နှလုံး။ 12. Spleen=သရက်ရွက်။ 13. Pancreas=အစာခြေမှု အကျိုးပြုသော အရည်တစ်မျိုး ထုတ်ပေးသည့်ဂလင်း။ ပန်ကရယ်။ မုန့်ချိုအိတ်။ 14. Adrenal Gland=(ကျောက်ကပ်အနီးရှိ) အဒရီနယ် (ဂလင်း)။ […]